Iiraan: weerarro lagu qaaday Xarunta Barlamaanka iyo qabrigii Khumayni – Kasmo Newspaper
Iiraan: weerarro lagu qaaday Xarunta Barlamaanka iyo qabrigii Khumayni
Updated - June 7, 2017 12:33 pm GMT
London (Kasmo), Caasimadda Iran e Tehran ayaa maanta barqanimadii ku baraarugtay weerarro isku toosan oo mar qur ah lagu wada qaaday xarunta Barlamaanka iyo Qabrigii Ayatullah Khumayni, aas’aasihii jamhuuriyadda.
Waa 2 goobood oo matala astaanta siyaasiga ah ee jamhuuriyadda waxaana fuliyay 2 kooxood oo an tiradooda la hubin, kuwaas oo middood, rag hubaysan oo u soo labistay sidii dumarkii, gudaha u galeen xarunta Barlamaanka.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya geerida ilaa 12 qof iyo dhaawacyada in ka badan 35 qof oo qaarkood halis yihiin. Xildhibaanno caraysan ayaa ku dhawaaqay ereyo lagu eedeynayo Maraykanka iyo Sacuudiga oo ay u haystaan in ay iyagu ka dambeeyaan.
Kooxda 2aad, sida wakaaladda wararka xukuumadda IRIB sheegtay, waxay ka koobnayd 3 nin oo hubaysan waxayna weerareen qabrigii Khumayni, halkaas oo midkood isku qarxiyay suunka qaraxyada.
Sirdoonka Iiraan ayaa sheegaya in ay jirto koox 3aad oo laga hortagay intii ayan falka samayn, laakiin ma cadda halka bartilmaameedkoodu ahaa.
Iiraan waxaa marar badan ooh ore u hanjabtay kooxda Daacish kuwaas oo iyaga iyo Al-Qacida u haystaan cadowgooda ugu weyn. Caqiidada salafiga jihaadiga ah ee 2daas kooxood waxay ka soo horjeeddaa qabuuraha culimada waaweyn oo la barakaysto, taas oo ay u arkaan Shirki loo baahanyahay in lala dagaallamo.
Dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Ciraaq iyo Libiya ayaa kooxahaasi horey uga burburiyeen qabuuro iyo mowlacyo shiicada iyo suufiyadu lahaayeen, waana markii u horreysay oo Daacish weerar ka fuliso gudaha Iiraan.